Indaba Yezobuchwepheshe - Ukulanda Ubuchwepheshe & Nesoftware
izinhlelo zokusebenza zefoni
Uhlamvu lwemali lwedijithali
kagesi kanye nogesi
Isiteshi Sevidiyo Yokudla
ISandboxie 5.55.22 Izilimi eziningi / 1.0.14 Kanye
admin Kwangathi 18, 2022 Awekho amazwana
ISandboxie iwuhlelo lwesoftware oluvikela imininingwane yakho ngenkathi upheqa iwebhu noma usebenzisa isoftware esolisayo. Ukuphequlula iwebhu, ukulanda, noma ukusebenzisa isofthiwe kungase kubangele ukuphepha kwesistimu…
I-MEmu Android Emulator 8.0.1 / 7.6.6 / 6.5.1 / 5.6.2.1
Isoftware ye-MEmu ye-Android Emulator ye-Android esebenza ngokukhethekile emidlalweni ye-Android. Ngesofthiwe yokulingisa i-MEmu ungakwazi ukujabulela izihloko eziningi ezihlukile ongazifaka ngqo kukhompyutha yakho. Wena…
I-Udemy – NestJS: Umhlahlandlela Kanjiniyela Ophelele wango-2021
Incazelo I-NestJS: Umhlahlandlela Ophelele Wonjiniyela uyisifundo esigcwele esigcwele sokuqeqesha okwakha okwasemuva ngeNest, TypeORM, neTypescript efaka ukuhlolwa nokuthuthuka. I-NestJS uhlaka lwasemuva lokwakha…
I-Wappler Pro 4.9.0 x64
I-Wappler iyisofthiwe enamandla yokuklama izixhumanisi zabasebenzisi kanye nezibonelo zamawebhusayithi nezinhlelo zokusebenza zewebhu, ezinezinzuzo eziningi kunezinye isofthiwe efanayo njenge-Adobe XD. …
IKali Linux 2022.2 x86 / x64
I-Kali Linux ukusatshalaliswa kwe-Linux okususelwa ku-Debian Linux futhi kungenye yezabelo eziyintandokazi kubaduni, kubaduni, nakwezokuphepha. Lokhu kusatshalaliswa kuhlinzekwa ngu…
Landa i-Alpine Arena 1.1.577 - Android
I-Alpine Arena iyisifanisi sokushushuluza esihehayo esiza nesenzo nomculo othokozisayo. Ungakwazi ukuncintisana nabanye abadlali bese uzama ukunqoba. Izinto ezihlanzekile zomdlalo zisetshenziswa ezinhlobonhlobo…
Landa i-Gunner Diary 1.0.17.1003 - Android
Umdlalo we-Gunner Diary umayelana nendaba yeqhawe elisezinganekwaneni elihlose ukucekela phansi amandla amabi. Unodumo olukhulu edolobheni futhi uyakujabulela ...
Landa Ikhadi Legazi 1.0 - Android
Igeyimu ye-Blood Card iletha inhlanganisela yezinto zokwakha ezikhangayo kanye ne-Rag Like, futhi ungathola amakhadi wamandla futhi usungule inqaba yakho phakathi negeyimu. Lo mklamo uzoba…
Landa i-Reckless Getaway 2 2.2.6 – Android
I-Reckless Getaway 2 ukujaha okujabulisayo nokuluthayo ongathola futhi ukujabulele ngezimoto ezinkulu nezidumile. Umdlalo unezithombe ezinhle kakhulu nezilula futhi ...
Landa i-Taxi Sim 2016 3.1 - Android
I-Taxi Sim 2016 ingenye yemidlalo engcono kakhulu yokulingisa ukushayela amatekisi yesistimu yokusebenza ye-Android, ongayithola ngokulanda i-Taxi Sim. Uma ufuna ukuthatha…
Landa iPirates Outlaws 3.30 - Android
IPirates Outlaws iyimpi phakathi kwamakhadi amaqhawe futhi ungaba neqembu labalwi abangcono kakhulu eqenjini lakho. Izinhlamvu ziklanywe kusengaphambili futhi wena ...
Landa Imiqulu Yabadala: Izinganekwane 2.15.1 - Android
I-Elder Scrolls: I-Legends game mobile iwumphumela okhangayo ozokwanelisa abalandeli bochungechunge lwe-Alder Scroll. Umdlalo wethulwa ngendlela yokulingisa…
1 2 3 4 ... 1,351 Olandelayo
KONKE KULANDELWE IVIDIYO EYODWA
unqulo wesi arab
umhleli wevidiyo yomsindo
Amaposi aphezulu namakhasi
Indaba Yezobuchwepheshe I-Copyright © 2022.